Lasa Vongan-tsira ny Vadin’i Lota | Tantara ao Amin’ny Baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Basque Bassa (Cameroun) Batak (Karo) Bichlamar Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Ga Galicienne Garifuna Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Herero Hiligaynon Hindi Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibinda Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Irlandey Isoko Italianina Kabiyè Kabuverdianu Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Luo Macua Malagasy Malayalam Malezianina Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mixe Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Nias Norvezianina Nyungwe Nzema Okpé Ossète Otetela Pangasinan Pendjabi Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Poloney Ponape Portogey Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quiché Romanianina Samoanina Sena Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tandroy Tarasque Tatar Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tiorka Tiv Tojolabal Totonac Tseky Tshwa Tsonga Twi Tzotzil Télougou Urhobo Uruund Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Édo Éwé
Niara-nipetraka tany Kanana i Lota sy Abrahama dadatoany. Lasa nanana biby fiompy be dia be ry zareo, ka tsy antonona an-dry zareo intsony ilay toerana nipetrahany. Hoy i Abrahama tamin’i Lota: ‘Efa tsy omby antsika intsony eto, fa andao isika hisaraka. Fidio àry izay toerana tianao haleha, dia izay tsy handehananao no handehanako.’ Tsy tia tena mihitsy i Abrahama e?
Nahatazana toerana tsara be i Lota teny akaikin’ny tanàna iray atao hoe Sodoma. Be rano sy bozaka maitso ilay izy. Naleony àry nifidy an’io ka nentiny nifindra tany ny fianakaviany. Nipetraka tao Sodoma ry zareo tatỳ aoriana.
Tena ratsy toetra be ny olona tao Sodoma sy tao Gomora, tanàna teo akaiky teo. Tian’i Jehovah haringana àry izy ireo. Te hanavotra an’i Lota sy ny fianakaviany anefa i Jehovah, ka nandefa anjely roa hiteny tamin-dry zareo hoe: ‘Mandehana haingana mitsoaka fa horavan’i Jehovah ity tanàna ity!’
Tsy tonga dia nandeha ry Lota fa nitaraikiraiky teo. Notantanan’ireo anjely àry izy sy ny vadiny ary ny zanany roa vavy, ka nentiny haingana nivoaka an’ilay tanàna. Hoy ireo anjely tamin-dry zareo: ‘Mihazakazaha dia aza mitoditodika mihitsy, fa raha vao mitodika ianareo dia ho faty!’
Tonga teo amin’ny tanàna antsoina hoe Zoara ry Lota. Nandatsaka afo sy solifara i Jehovah avy eo, ka rava tanteraka i Sodoma sy Gomora. Tsy nankatò an’i Jehovah anefa ny vadin’i Lota fa nitodika. Lasa vongan-tsira àry izy! Tsy maty kosa i Lota sy ny zanany vavy, satria nankatò an’i Jehovah. Tsy maintsy ho nalahelo be ry zareo fa tsy nankatò ny maman-dry zareo. Aleo foana àry manaraka ny tenin’i Jehovah!
“Tsarovy ny vadin’i Lota.” —Lioka 17:32
Fanontaniana: Nahoana i Jehovah no nandrava an’i Sodoma sy Gomora? Nahoana no lasa vongan-tsira ny vadin’i Lota?
Karatra Ara-baiboly: Lota
Adikao ity karatra ara-baiboly ity, ary fantaro bebe kokoa ny momba an’i Lota, zana-drahalahin’i Abrahama.